Cabdi Xaashi oo War lama filaan kasoo saaray soo jeedinta Puntland ee Shirka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Gudoomiyaha Aqalka Sare ee muddo xileedkiisu dhammaaday Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa soo jeediyey saddex arrin oo la xiriirta shirka uu 15-ka Febraayo ku baaqay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo balse waxa uu dalbaday laba arrin.
Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday ee Farmaajo ayaa iclaamiyay shir looga hadli doono xaaladda siyaasadeed ee dalka, marxalada kala guurka ah iyo doorashada isugu yeeray Madaxda dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir.
Guddoomiye Cabdi Xaashi ayaa ku baaqay in Shirka la balaariyo, sidoo kalena taageeray soo jeedinta Puntland ee ah in Shirkaas lagu qabto Caasimadda dalka ee Muqdisho, maadaama uu idlaaday muddo xileedka dowladda Federaalka.
Sidoo kale Cabdi Xaashi ayaa ku baaqay in si wadajir ah loo ilaaliyo nabadda iyo xasiloonida dalka, isla markaana laga fogaado wax kasta oo Soomaaliya u keeni kara dib u dhac iyo khalalaaso hor leh.
Puntland oo aan Madaxweyne Farmaajo latashi kala samaeeyn Shirka ayaa soo jeedisay in Shirka Madaxda ee la qorsheeyay inuu dhaco Magaalada Garoowe lagu qabto Magaalada Muqdisho, ayna kasoo qeyb galaan Beesha Caalamka.
Jubbaland oo caddeysay Mowqifkeeda Shirka uu ku baaqay MW Farmaajo